Blockchain News 26 Ndira 2018 - Blockchain News
Ndira 26, 2018 arun
BitGo kuwana zvakakwana yaidzorwa kuvimba kufambidzana pamusoro $ 12b mune midziyo
BitGo, mutungamiri digitaalinen mari kuchengeteka negadziriso zvechechi vanoita, akazivisa kuti wakapinda mune zvachose chibvumirano kuwana Kingdom Trust Company, mumwe South Dakota – zvakazara yaidzorwa kuvimba pamwe pamusoro $12 mabhiriyoni midziyo. The kutengeserana ichiri pasi netsika okupedzisa mamiriro uye pamutemo approvals.
"Misika yemari Global vakada chive mhinduro chipiriso zvose magumo-to-magumo mabikirwo kuwana digitaalinen dzeEurope uyewo pamutemo uye abvume anotonga zvakakodzera kuti nokusangana kupinda dzacho nemigove mumabhizimisi zvemari"
Kingdom Trust anosangana zvose zvinoshanda zvinodiwa Internal Revenue Code 408 kuti ave anokwanisa zvirambe zviripo kunorondedzerwa muna Investment Vemazano Act kuti 1940. The custodial mabasa zvaipiwa kuvimba kambani, pamwe BitGo kwakaita digitaalinen mari kuchengeteka dziviriro Software, achaita kuti makambani akabatana chete renguva wemagazini, panguva pamwero Mupi onsite uye paIndaneti kudzivirira digitaalinen mari upfumi dzaidzidziswa zvechechi vanoita.
“BitGo uye Umambo vari kuvaka zvigadzirwa ramangwana – ukaroorana mabikirwo itsva kuchengeteka uye chidhiraivho vanoita zvose zvinoda.”
Kazakhstan nemiedzo kubhadhara motokari fines pamwe Bitcoin
Kazakhstan ari zvichiita kubhadhara motokari fines pamwe cryptocurrency. The Mobile kushanda uye basa OKauto.kz watopiwa zvinobudirira vaedzwa nomumwe creators chikumbiro – Ali Shaykhislam. zvisinei, vanyori basa zvinosimbisa kuti mashandiro itsva vachiri vachimhanya pabvunzo muoti.
The creators of vakaziva mukana yokubhadhara fines hurumende kutyora rwemotokari anobata cryptocurrency pakati bitcoin.
Ichi yepachena Anwendung chinopa ongororo basa uye Notifications pakati fines rakapa, nezvimwe zvinhu.
It kusvetuka kuti hapana yepamutemo chinzvimbo kuti cryptocurrencies muna Kazakhstan, havana vaiona mari kana nhumbi zvemari.
Russian cryptocurrency bhiri dzichitaurwa
The Russian Bazi Finance yakabudisa bhiri “On Digital Financial Zvinhu”, rakaitirwa vadzvinyirire cryptocurrencies muRussia.
Bazi Finance rinoreva digitaalinen zvinhu zvemari sezvo “pfuma mune zvemagetsi muchimiro, akasika kushandisa encryption (cryptographic) zvinoreva.”
Unogona kuchinjana zviratidzo mumwe cryptocurrency kana rubles chete kuburikidza chinokosha exchanges – “Exchange dzaishandisa ose digitaalinen mari yesangano”.
Chete repamutemo munhu vakanyorwa muRussia, uye kuchengeta mitemo No. 39-FL “On the kuchengetedzeka pamusika” kana No. 325-FL “On akaronga zvakaenda” anogona kuva opareta kwakadaro.
Nzira kuti buri uye kuramba nyaya dzinofanira kusimbiswa ne Central Bank.
The regulator anoda kutenga chete zviratidzo kuti makambani vanoshandisa kurera mari rubles, Anonyevera Bazi Finance.
Shumiro anotenda kuti hazvibviri kuti kurambidza zvatinosiita kutenga cryptocurrency, nekuti zvimwe zvisiri pamutemo mabhizimisi kuda “famba” kumusika ichi.
Uyewo mune gwaro pane tsanangudzo akangwara zvibvumirano uye mugodhi, iro vaiona entrepreneurial basa nokuti kusikwa kana chivimbo chakasimba kuti cryptocurrency mukutsinhana muripo. Chii mitero achaiswa yaitarirwa mabasa miners, kusingajekeswi.
Kana gwaro rinopfuura kuverengwa nhatu State Duma, uye anogamuchira akabvumirwa Federation Council uye siginicha kuti purezidhendi Russian, Chichasimbiswa kutevedzerwa 90 Mazuva namarudzi yepamutemo bhuku. Bhiri anogona Akave nokuvandudza paaikurukura vari muparamende.
Previous Post:The yemasvomhu vakaverenga mutengo bitcoin nokuda 2018
Next Post:Chainalysis – boka kuti akaparadza kusazivana Bitcoin